Wasiirka duulista hawada oo indha indheeyey garoonka Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka duulista hawada oo indha indheeyey garoonka Kismaayo
2nd June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Kismaayo – Mareeg.com: Wasiirka Gaadiidka iyo duulista hawada ee Xukuumadda Soomaaliya, Saciid Jaamac Maxamed Qoorsheel oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan hay’adda duulista iyo Saadaasha Hawada ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Wasiir Qoorsheel iyo mas’uuliyiinta la socday markii ay gaareen Kismaayo waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba oo uu ugu horeeyo ku-xigeenka hogaamiyaha maamulkaas Cabdiqaadir Xaaji Lugadheere iyo saraakiil kale.
Wasiirka iyo xubnihii la socday waxa ay kormeer ku sameeyeen qeybaha uu ka koobanyahay garoonka, si ay qiimeyn ugu sameeyaan xaaladda garoonka oo la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo.
Socdlaaka wasiir Qoorsheel iyo saraakiisha la socota ku tageen Kismaayo ayaa qeyb ka ah qorshe ay waddo wasaaradda duulista hawada Soomaaliya oo lagu doonayo in dib looga hagaajiyo garoomadii dalka si ay u qabtaan adeegayadii loogu talagalay.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya, Siciid Jaamaca Qoorsheel ayaa 5-tii bishii dhamaatay ee May dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo garoonka Baydhabo.
Xiisad ka dhalatay niman ciidanka Kenya ku dilay Mandera
AMISOM and Sierra Leone Discuss the Situation of Sierra Leone Troops in AMISOM